आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प – Health Post Nepal
आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प
२०७५ माघ १८ गते ९:१४
डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि दबाब दिन नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प हुने भएका छन् ।
संघले डा. केसीको १६औँ अनशनको २४औँ दिन एक दिनका लागि सम्पूर्ण संस्थामा सांकेतिक विरोध स्वारुप बन्द आह्वान गरेको हो । संघको आह्वानसँगै विहानदेखि अधिकांश ठूला अस्पतालमा ओपिडी चलाएका छन् । औपचारिक रुपमा ओपिडी बन्द नगरेको अस्पतालमा पनि चिकित्सकहरु स्वेच्छिक रुपमा उपस्थित नभएपनि सेवा हुनसकेको छैन् ।
वीर, त्रिवि शिक्षण र धरानको रेजिडेन्टको आह्वानमा अघिल्लो विहीबारदेखि नै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको छ । सरकारले शान्तिपूर्ण अनशन, धर्ना र र्यालीलाई नसुनेको भन्दै संघले शुक्रबारका लागि बन्द घोषणा गरेको हो । सरकार समर्थित केही चिकित्सकले संघको बन्दविरुद्ध विरामी हेर्ने घोषणा गरेपनि त्यसले संघले गरेको बन्दमा खासै असर नपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
संघले गर्दै आएका अनशनलगायत आन्दोलनका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उल्टै घुसपैठ र अवरोध सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएकाले स्वास्थ्यसेवा नै बन्द गर्ने तहमा उत्रिनुपरेको संघले जनाएको छ । सरकारका हालसम्मका रबैया निन्दित र भत्र्सनायोग्य भएको जनाउँदै संघले त्यसले चिकित्सकहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताएको छ ।